Khaanadda dharka ee 'Kingsman: Goobaha Dahabiga ah' | Ragga Stylish
Qaybta koowaad waxay dejisay baarka aad u sarreeya, laakiin waxay u muuqataa taas labiska 'Kingsman: Goobaha Dahabiga ah' ayaa maamuli doona oo la mid noqon kara xitaa kii ka horreeyay..
Waxaa mar kale agaasime ka ah Matthew Vaughn, filimka garaac tiyaatarada dayrta soo socota oo ay ku raran yihiin muuqaalo lagu qanco oo u dhaqaaqa labadaba goobta rasmiga ah - dareenka ugu ballaadhan ee ereyga – iyo midka aan caadiga ahayn.
Taron Egerton wuxuu dib u soo celinayaa doorka Eggsy, oo ah wiil xaafad ah oo, ka dib markii ay qortay hay'ad basaasnimo, loo beddelay wakiil la sifeeyay oo leh labis xaasidnimo leh iyadoo ay ugu mahadcelinayaan qaar ka mid ah dacwadaha ugu wanaagsan ee Mr Porter.
Maaddaama qaybta hore ay socoto, dabeecadda ayaa dhadhan u leh xirashada suud. Qeybta dambena waxaa iska cad inay durba tahay farshaxan aan qarsoodi u aheyn, sida ku cad tan jaakad casho maro jilif ah - Aad u cunid ahaan xilli ciyaareedka soo socda - iyo suudkan oo leh jaakad laba-geesood ah.
Ku soo noqnoqoshada jilaayaasha, Colin Firth iyo Mark Strong waxay ciyaaraan jaakad dhogor idaad ah iyo jaakad jilicsan, sida ay u kala horreeyaan, boodhadhka dabeecadda filimka.
Muuqaal rasmi ah, laakiin leh lahjad rustic ah oo muujineysa taas, halkii aad si fudud ugu celin lahayd isla qaaciddada, qolka labiska ee 'Kingsman: Goobaha Dahabka' waxaa looga dan leeyahay in lagu ballaadhiyo dhinacyada kala duwan ee qaybta hore.
Channing Tatum waa mid ka mid ah wajiyada cusub ee jilayaasha ay la wadaagi doonaan guuleystayaasha Oscar Halle Berry iyo Julianne Moore. Labiska labiska Aktarka ayaa noqonaya mid Mareykan ah.
Un cowboy casri ah oo joonis ah iyo jaakad denim, oo buluuggiisa mugdiga ah kaliya lagu joojiyo shaati cad. Qalabka ayaa yar, laakiin xoog leh, sida koofiyadda, saacadda gacanta iyo suunka suunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Qeybta dambe ee 'Kingsman' ma noqon doontaa filimkii ugu quruxda badnaa ee 2017?